तीज मान्न माइती गएकी तर, अचानक घर बोलाएर किन गरियो हत्या ? | समाचार
September 8, 2021 NepstokLeaveaComment on तीज मान्न माइती गएकी तर, अचानक घर बोलाएर किन गरियो हत्या ?
काठमाण्डौं । दुई वर्ष अघिमात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएकी एउटी चेलीको निकै रहस्यमय मृत्यु घटना बाहिर आएको छ । रुपन्देही तिलोत्तमा ८ मणिग्रामस्थित ४ नम्बर टोल माइती घर भएकी २७ बर्षीया सीता भण्डारी पौड्यालको आफ्नै घरमा रहस्यमय मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
४३ बर्षीय टीका पौड्यालकी श्रीमती सीताको आफ्नै घरको कोठामा रहस्यमय मृत्यु भएको घटना मंगलबार माइतीजनले पत्रकार सम्मेलन गरि बाहिर ल्याएका हुन् । भदौ ६ गते तीजसमेत मानेर घर फर्किने गरि माइतीमा आएकी सीतालाई श्रीमान टीकाले भदौ १९ गते दिउँसो घरमा भतिजको बर्थडे छ ‘
तिमी घर जाउ म पनि साँझ घर आउँछु’ भनेर पाल्पाबाट फोन गरे । उनले श्रीमानको बचन हार्न नसकी उनी त्यस दिन दिउँसो घरबाट हिँडेका थिए । माइतीले उनी घरबाट हिँडेदेखि राति ९ बजेसम्म माइतीले फोन गरिरहे तर उनको फोन उठ्दै उठेन ।
अर्को दिन एक्कासी अर्को माइतीलाई काम छ भनेर टीकाको घरबाट बोलाइयो । माइतीजन त्यहाँ पुग्दा मुहार रक्ताम्मे अवस्थामा सीताको मृत्यु भइसकेको थियो । उक्त दृश्य देख्न साथ त्यहाँ पुगेका सीताका बाबु आमा बेहोस भई ढले ।
खुशिको खबर सुधार हुँदै मोडल निशा घिमिरेको स्वास्थ्य
साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका सबै प्रहरीले पाए सफाइ